Iindaba - I-Mevos International Congress ye-Aesthetic Surgery kunye ne-Medical 2020 ehlotyeni
I-Mevos International Congress ye-Aesthetic Surgery kunye ne-Medical 2020 ehlotyeni
I-MEVOS International Congress ye-Aesthetic Surgery kunye neMedicine, Ukuqokelela iinkokeli zehlabathi kwishishini lotyando lweplastiki, Ukuxoxa ngetekhnoloji yamazwe ngamazwe kunye nenkqubela phambili kwisayensi yezemfundo, Ukufunda iipatheni zokucinga zeenkokeli ezinegunya kunye noogqirha abaphumeleleyo, Ukusasaza iingcamango eziphambili zolawulo lwehlabathi kunye ne-Intanethi. ukusungula izinto ezintsha, Ugutyulo oluBanzi lwamashishini asemthethweni, iiyunivesithi kunye namaziko ophando, Ingqungquthela yoshishino lwezobisi lwezonyango yaseTshayina edibanisa izifundo, ubugcisa, ubugcisa, ulawulo, ifashoni nenkcubeko.
Ingqungquthela izibophelele kuphando kunye nokufumanisa utyekelo lophuhliso olujikelezayo lweemveliso zonyango lwehlabathi jikelele lwe-cosmetology, itekhnoloji, iingcali kunye neshishini, uqikelelo kunye nokukhulula indlela yophuhliso yexesha elizayo. Kwelinye icala, ibonisa iithiyori zemfundo yamazwe ngamazwe kunye nobuchwepheshe bamva nje botyando lweplastiki, isifo solusu kunye ne-cosmetology ye-laser, i-cosmetology ye-cosmetology, i-cosmetology yezonyango yaseTshayina, unyango oluchasayo kunye nezinye izifundo ezidumileyo; kwelinye icala, ixoxa ngendlela esebenzayo yokudibanisa ngokuthe ngcembe utyando lobuhle kunye namasebe amayeza, ukuhlaziya unyango oluncinci kunye nonyango olungaphazamisiyo phantsi kwenkqubela phambili yesayensi kunye nobuchwepheshe bezinto ezintsha, izixhobo ezitsha, amayeza amatsha kunye neenkqubo ezintsha.
Kulo mboniso, imveliso eNtsha ----Isixhobo se-ISEMECO 3D Smart Skin Analysis iboniswe okokuqala.
Inkqubo ye-MC88 yoHlalutyi lwesikhumba: I-5 Spectra, i-15 Iindlela zeMifanekiso eNgcali, i-5 ~ 7 iminyaka yokuQikelela kwesikhumba. Idatha iqokelelwe kwaye imifanekiso ithelekiswa nedatha yabantu abaneminyaka efanayo kunye neprofayili. Ulusu lwesigulane sakho luthelekiseka ngokuthe ngqo kunye nezo zikwisiseko sedatha kwaye iziphumo ziboniswa ngokusekelwe kwikhadi lamanqaku. Iimveliso zobuhle ezicetyiswayo kwaye wongeze iSicwangciso soNyango lweSkin Beauty. Oyena mncedisi wentengiso kwiiklinikhi zobuhle.
I-ISEMECO isetyenziswa kakhulu kwiSebe leDermatology yeKliniki yeeNgcali zeZibhedlele, uMbutho wezoNyango wePlastiki yoNyango kunye neZiko loPhando lwezeNzululwazi.
* Umboniso weHD + ikhompyuter yePC
*Skin Cloud Algorithm
*Uhlalutyo lwedatha ebonakalayo
*Ingcebiso enxulumene nemveliso
*Umbuzo wengxelo yeMveliso ye-Intanethi
*Ulawulo lolwazi lwabathengi
*Ukugcinwa kwelifu okungenamkhawulo
*Uyilo olukwinqanaba eliphezulu lokusebenzisana kwe-UI
*Iqela lethu liphendula ngokukhawuleza kwintengiso kunye nesoftware iteration ikhawuleza
*Inkqubo ye-opteating ye-10, izinzile ngakumbi
Ixesha: Agasti 13 ukuya kuSeptemba 15, 2020.
I-MEICET ngoku kwaye ilinde wena.
Ixesha lokuposa: Sep-24-2020